Happy 2016, Chinese Year-NEWS-Hunan okusha Astiland Medical Aesthetics Technology Co., Ltd.
umshini Cellulites ukususwa
Sokuvivinya umzimba umshini
Laser ubuhle umshini
Izinwele ukususwa umshini
Anti umbimbi umshini
Amatebhe ubuhle umshini
Photodynamic yokwelapha umshini
isikhathi: 2015-12-20 Okuhamba phambili kwe-: 132
Sawubona abangane bami，Jabulela unyaka omusha!
Siyabonga konke ukwesekwa yakho ASTILAND ngonyaka odlule, ufisa ngobuqotho wena impilo enhle, ingcebo enkulu futhi sikufisela okukhulu. Ngomusa wazi ukuthi yethu Chinese New Year siyeza, singathanda ukukwazisa ukuthi isimiso sethu iholide Spring Festival kusengaphambili njengenjwayelo ukuze ukwazi ukuhlela ngokuvumelana.
Zethu 2016 Spring Festival Holiday kuyinto Feb 7th, 2016 ukuze Febhuwari 15, 2016, siza ucabangele ngomusa ipulani bese yenza iplani. Phakathi nenkathi ngaphambi iholide, isimiso sethu ukukhiqizwa babeyoba matasa kakhulu. Uma uneminye oda entsha noma udinga lutho ngalesi sikhathi, sicela ngomusa ngiyibeke kusengaphambili ukugwema noma ikuphi ukuzindela ukuthi kubangelwa ngamaholide.
Ngesikhathi esifanayo, siba yokuthengisa iholide phakathi Dec 25th,2015 - Febhuwari 15, 2016.Kuze kube manje, Zonke ikhotheshini yethu isebenza , futhi uthole ekhethekile 20% Isaphulelo plus. Noma yimuphi umbuzo sicela uxhumane ngomusa yokuthengisa E-mail.
Okwangaphambilini Ikhasi : 2016 Sikhungo Isaziso Okokuqala
Ikhasi Elilandelayo : Happy Mid-Autumn festival
Engeza: Isakhiwo 13, Xinggong Imboni Park, Yuelu District, Changsha, Hunan, China
IKHAYA / IMIKHIQIZO / MAYELANA NATHI / IZINDABA / XHUMANA NATHI